Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Sheremetyevo dia mametraka mpamatsy horonantsary hanampiana ireo mpandeha tsy mahay mihaino sy miteny
Fitaovana nomerika vaovao ao Mosko Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo manome fampahalalana ho an'ireo mpandeha manana fahasembanana, ao anatin'izany ireo manana fahasembanana amin'ny fihainoana sy fitenenana. Ny Video Information Assistant (VIA) dia miorina eo amin'ny faritra ialan'ny besinimaro ao amin'ny Terminal B ao amin'ny birao fampahalalana (3rd rihana).
Fitaovana tokana ho an'ny seranam-piaramanidina Rosiana ny VIA. Ny fitaovana dia mamela ny mpandeha handray haingana ny fampahalalana rehetra mety ilain'izy ireo momba ny serivisy eny amin'ny seranam-piaramanidina, ao anatin'izany ny tolotra manokana ho an'ireo sembana. Ho an'ireo mpampiasa manana fahasembanana amin'ny fihainoana sy fitenenana, ny menan'ny fitaovana dia misy fizarana manokana misy fampahalalana momba ny fomba mialoha ny sidina, ny fitsipi-pitondrana enta-mavesatra sy ny enta-mavesatra, ny fitsipi-pitondrantena ho an'ireo mpandeha raha sendra olana tampoka eo amin'ny seranam-piaramanidina sy maro hafa. Ny fampahalalana rehetra ato amin'ity fizarana ity dia aseho amin'ny tenin'ny tanana rosiana.
Ny VIA dia manana efijery mikasika ary manana interface mahasoa sy mora ampiasaina. Ny mpampiasa tsirairay dia afaka misafidy iray amin'ireo lohahevitra natolotra tao amin'ny menio, ary avy eo nipoitra teo amin'ny efijery ny fampahalalana an-tsoratra sy sary. Ao amin'ny fizarana "Mpandeha tsy mandre sofina", ny fampahalalana rehetra dia azo jerena ao amin'ireo vatan-dahatsary misy dikanteny misy mpandika tenin'ny tanana.
Ny famoronana tontolo milamina sy mandray olona ho an'ny sokajy mpandeha rehetra no laharam-pahamehana amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo. Tamin'ny taona 2019, mpandeha manana fahasembanana 229,638 no nampiasa ny serivisy tao amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo, 26% mihoatra ny tamin'ny 2018.
Ao amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo dia misy efitrano fialan-tsasatra efatra ho an'ny mpandeha sembana: Mercury (amin'ny faritry ny Terminal B), Saturn (amin'ny faritry ny terminal D), Orion (amin'ny faritry ny terminal C) ary Sirius (ao amin'ny Faritra "madio" ao amin'ny Terminal E), efitrano fandraisam-bahiny nohamafisina voalohany ho an'ireo mpandeha sembana.
Seranam-piaramanidina Sheremetyevo dia manana tontolo iainana hipetrahan'ny mpandeha manana fahasembanana:
Ireo mpandeha manana fahasembanana dia omena serivisy laharam-pahamehana amin'ny fomba ofisialy mialoha ny sidina, ary ny mpandeha manana fahasembanana dia afaka mameno ny taratasy filaharana anaty serivisy ho an'ny serivisy eny amin'ny seranam-piaramanidina, na amin'ny tranokala ofisialy na amin'ny finday.
Ny kaonteram-pisoratana anarana, fampahalalana ary fitiliana entana sy ireo toerana fandraisana any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ho an'ireo manana fahasembanana dia misy tadivavarana fampidirana an'ireo mpandeha tsy ampy fihainoana.
Ny làlam-pandehanana sy ny kisarisary mnemonic feon-kira izay manome ny mombamomba ny mpandeha ny toerana misy azy sy ny mety ho làlan'ny fivezivezena dia misy amin'ny soratra Braille sy miaraka amin'ny feo.
Ny arabe fidirana amin'ny terminal dia misy lalantsara, ary misy toerana fijanonana maimaimpoana 350 ho an'ny fiaran'ny mpandeha manana fahasembanana.
Ny fidirana amin'ny tranobe dia misy varavarana misosa, ary ny mpandeha sembana dia manana safidy hangataka mpanaraka amin'ny fidirana.
Ny sezakodia misy karazany isan-karazany dia omena ho an'ny hetsika tsy voasakana amin'ny alàlan'ny terminal.
Ny seranam-piaramanidina dia manana fiaran-dalamby sy lampihazo.
Ny efitrano fandroana rehetra natao ho an'ny olona manana fahasembanana dia miaraka amin'ny fanohanana manokana, rafi-piantsoana vonjy taitra, sary masina "Entry / Exit" azo ampiarahina, ary farango ho an'ny sakantsakana.